Otú nyefee Text Ozi New Android
> Resource> Android> otú nyefee Text Ozi New Android
Ndewo, unu niile. M chọrọ enyemaka / ndụmọdụ nyefee m ozi ederede site na m ochie naaa wildfire ka ọhụrụ m Samsung Galaxy II ma ọ bụ m PC. M na-azọpụta m kọntaktị na SIM ma na-apụghị ịhụ a taabụ ime nke a na akụkụ. M gbalịrị ka m abanye na na android ahịa ma m ga-esi na-esonụ ozi "na-apụghị iru a pụrụ ịdabere na data njikọ nkesa" ọbụna mgbe m na-na na jikọọ WiFi n'ụlọ. M mkpa n'ezie na-ndị a ozi otú enyemaka ọ bụla / ndụmọdụ na-kpọrọ ihe nke ukwuu. Ekele dịrị. John.
Chee echiche ike nyefee ozi ederede ọhụrụ Android ekwentị? N'adịghị ka music na i nwere ike nyefee gị Android ekwentị na otu eriri USB, ị ga-agwa enyemaka site a ọkachamara-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ. Luckily, ebe a bụ smart ekwentị transfer software aha ya bụ Wondershare MobileTrans ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac. Ọ bụ a n'ezie shortcut, na-enye gị ohere iji nyefee niile ozi ederede si ochie Android ekwentị, iDevices na ekwentị Nokia ndị ọhụrụ Android ekwentị na otu Pịa.
The Mac version adịghị ekwe ka ị nyefee faịlụ ka / si Nokia (Symbian) ekwentị n'ihi na oge ịbụ. Ebe a na-ewe Windows version dị ka a na-agbalị.
Mfe nzọụkwụ nyefee SMS ọhụrụ Android ekwentị
Download onye-click ekwentị transfer software na kọmputa.
Cheta na: Wondershare MobileTrans arụ ọrụ nke ọma na Iṅomi SMS n'etiti gam akporo igwe, dị ka Samsung, HTC, Sony. Ebe a bụ ndepụta nke ọzọ na-akwado gam akporo igwe.
Nzọụkwụ 1. Wụnye onye-click ekwentị transfer software
Nke mbụ niile, wụnye ekwentị transfer software na kọmputa. Ẹkedori ya. Ke akpan window, na-aga Malite.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ ekwentị abụọ na kọmputa
Mgbe ahụ, jikọọ ma nke ọhụrụ Android ekwentị na ochie ngwaọrụ-agba ọsọ iOS, Symbian ma ọ bụ Android na kọmputa na USB cables. Onye a-click ekwentị transfer software ga-akpaghị aka ịchọpụta na-egosi na ekwentị abụọ ke akpan window. N'etiti ekwentị abụọ bụ "tụgharịa" button. Pịa ya, na ebe nke ekwentị abụọ ga-agbanwe.
Dị ka ị na-ahụ, ebe a bụ a "Doro Anya data tupu oyiri". Tinye akà rà anya ya ma ọ bụrụ na ị ga-amasị ikpochapụ niile SMS na ọhụrụ Android ekwentị ịzọpụta ndị si ochie Android ekwentị. Ọ bụrụ na, na-edebe ya kpacharaghị.
Nzọụkwụ 3. Paghaa ozi ederede ọhụrụ Android ekwentị
Dị ka ọ na-egosi, ị pụrụ ịkpali dị iche iche faịlụ ka ọhụrụ Android ekwentị na otu Pịa.
Android ndị ọhụrụ Android ekwentị: SMS, kalenda, kọntaktị, oku na ndekọ, ngwa, music, videos na foto nwere ike-kpaliri.
iDevice ka Android ekwentị: SMS, kọntaktsị, kalinda, music, videos na foto nwere ike bufee.
Nokia ọhụrụ Android ekwentị: SMS, photos, videos, na kọntaktị na music nwere ike kwagara ọhụrụ Android ekwentị. (Nani Windows version eme)
Wepụ akara tupu ndị ọzọ faịlụ ma e wezụga ozi ederede. Mgbe ahụ, pịa Malite Copy. Jide n'aka gị ma igwe na-ejikọrọ oge niile. Mgbe nyefe usoro-agwụ, ị nwere ike pịa OK rụchaa ya.
Download MobileTrans na-agbalị na-ebufe ozi ederede ọhụrụ Android ekwentị.
Olee otú Zụrụ Music on Android na Android égwu?